Ifulethi elinegumbi elinye eLe Vauclin, elinombono omangalisayo wentaba, igadi evaliweyo kunye neWiFi-2 km ukusuka elunxwemeni.
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLoic, Estelle & Co
Eli gumbi lihlala eLe Vauclin, lilungele abakhenkethi abathathu. Inika igumbi lokulala, igadi evaliweyo kunye neWiFi.
Indawo yokuphumla ilungele ukuphumla emva kosuku elangeni. Gcoba kwisofa etofotofo kwaye wonwabele incwadi elungileyo okanye uthathe ithuba lezinto eziluncedo ezifumanekayo, kubandakanya iWiFi.
Ikhitshi lixhotyiswe ngokwaneleyo ukulungiselela ukutya okuthandayo. Yonwabela isidlo sakho esijikeleze itafile yokutyela ehlala i-5 okanye ngaphandle, kwithafa okanye egadini ukonwabela iimbono zeentaba kunye nesixeko.
Le ndlu inegumbi lokulala elitofotofo elinebhedi ephindwe kabini. Igumbi lokuhlambela lifakelwe ishawa kunye nendlu yangasese.
Indawo yokuhlala ine-jacuzzi, i-fan, iimveliso zokucoca, izixhobo ze-ayina, i-dryer, i-air conditioning, igumbi lokugqoka, i-mosquito net kunye ne-vacuum cleaner.
Qaphela ukuba ukucoca, iitawuli kunye nelinen yebhedi zibandakanyiwe kwintlawulo yokurenta. Irhafu yabakhenkethi ye-euro eyi-1.5 ngomntu ngobusuku iya kufuneka xa ufika.
Indawo yokupaka iyafumaneka kwindawo (ezinye iintlawulo zinokufakwa). Ukutshaya akuvumelekanga ngaphakathi. Izilwanyana zasekhaya azivumelekanga. Amaqela awavumelekanga.
Le ndlu yonwabela indawo enelungelo elikuvumela ukuba ukonwabele ukuhlala kwakho kule ndawo. Izinto ezininzi ezikulindileyo kwindawo ezikungqongileyo, ezinje ngeBhayisekile, iParagliding, iJet-Skiing, iWindsurfing, iSnorkelling, ukuqubha, imidlalo yasemanzini, ukusefa, ukutyibiliza emanzini, ukuhamba ngesikhephe, ukukhwela ihashe, iGalufa, ukuHamba intaba, ukuntywila emanzini, ukukhwela intaba, ukukhwela ilitye, Ukuloba kunye neTennis. Ulwandle lwasePointe Faula lukumgama oziikhilomitha ezi-2 ukusuka kwindlu. Ibala legalufa laseTrois Ilets likumgama oziikhilomitha ezingama-28 ukusuka kwigumbi lokuhlala.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R10822
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Le Vauclin